परिवार सजाइएको छ, कसरी रंग छनौट गर्ने? - समाचार - Zhejiang पूर्वी Argon रासायनिक I/ई कं, लि
सबै भन्दा माथि स्पष्ट हुनु पर्छ, रंग के हो, emulsioni रंग के हो। सरल शब्दमा भन्नुहोस्: पछिल्लो पुस्ता रंग = रंग; रंग को यो पुस्ता = लेटेक्स रंग
कोटिंग्स मा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिल्म बनाउने पदार्थ र फैलावट मिडिया को शामिल छ। फिल्म बनाउने सामग्री पर्खाल ब्रश पछि छ, फैलावट को माध्यम volatilizes पछि, भित्ता मा छोडिएको रंग फिल्म को परत।
त्यसैले पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण छैन, स्वास्थ्य स्वस्थ छैन, र फैलावट माध्यम (विलायक) एक सीधा सम्बन्ध छ।
जब हामी रंग संग बच्चाहरु थिए, रंग फैलावट मध्यम मुख्य रूप xylene छ, अस्थिरता प्रक्रिया मा गन्ध धेरै ठूलो छ। (न nail पोलिश संग केटीहरु राम्रो जान्नुपर्छ।)
अब सामान्य इमल्शन रंग, फिल्म पदार्थ मा रंग पायस हो, यो पानी हो, इमल्शन रंग फैलावट मध्यम पानी हो, यी दुई पानी हो। वाष्पशील बाहिर पानी वाष्प र cosolvent को एक सानो मात्रा हो, पानी रंगहीन र स्वादहीन छ, यद्यपि यो पनि विलायक गन्ध मा मद्दत गर्दछ, तर cosolvent को सामग्री धेरै सानो छ, गन्ध धेरै सानो हुनेछ।
यसबाहेक, तेल उत्पादनहरु वर्तमान मा उद्योग मा अधिक प्रयोग गरीन्छ, एक पटक व्यापक रूप मा तैलीय रंग को बाहिरी पर्खाल को भवन मा अब एक ठूलो क्षेत्र मा प्रतिबन्धित गरीएको छ, त्यसैले घर सजावट अब ज्यादातर लेटेक्स रंग प्रयोग गरीन्छ।
कसरी रंग को गुणस्तर छुट्याउन?
पेशेवर विश्लेषण को परिप्रेक्ष्य बाट, त्यहाँ रंग को गुणस्तर छुट्याउन को लागी धेरै तरिकाहरु छन्, तर प्रयोगकर्ताहरु को बहुमत को ध्यान मा पेशेवर छैन, त्यहाँ कुनै पेशेवर विश्लेषण उपकरण छैन, हामी सबैभन्दा सरल र सहज पहलुहरु बाट छुट्याउनेछौं: राम्रो संग पहिचान बजार मा ज्ञात ब्रान्डहरु, ठूला ब्रान्डहरु ग्यारेन्टी छन्; हेर्नुहोस् कि त्यहाँ प्रासंगिक पर्यावरण प्रमाणीकरण मार्क को माध्यम बाट छ, अधिक प्रमाणीकरण को माध्यम बाट, अधिक ग्यारेन्टी। प्रशंसक गन्ध गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ थपिएको स्वाद, सुगन्ध वा तिखो एक आदर्श विकल्प होईन, यदि यो शुद्ध लोबान हो, यो शुद्ध शुद्ध स्वाद हो; रंग को राज्य जाँच गर्नुहोस्, रंग को गुणवत्ता सामान्यतया अधिक चिपचिपा, कुनै हार्ड ब्लक, मिश्रण पछि एक समान राज्य थियो।
राम्रो रंग को विशेषताहरु के हुन्?
आवरण राम्रो छ, दृढता राम्रो छ, भण्डारण प्रदर्शन राम्रो छ, निर्माण प्रदर्शन राम्रो छ, पर्यावरण संरक्षण र स्वास्थ्य, मूल्य उचित छ, अवश्य, कोटिंग को लाभ को अलावा, तर यो पनि आफ्नो छनौट को लागी आफ्नै आवश्यकताहरु संग संयुक्त। : उदाहरण को लागी, बैठक कोठा को लागी मानिसहरुको कोठा को यो ठूलो प्रवाह, तपाइँ बलियो विरोधी प्रदूषण क्षमता संग रंग छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
उत्तर संग तुलना, दक्षिण राम्रो नमी-प्रमाण, फफूंदी-प्रमाण कोटिंग छान्नुभएको थियो; जाडो को तापमान उत्तर मा अधिक चरम छ, जस्तै पूर्वोत्तर, राम्रो ठंढ प्रतिरोध रंग छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो आफ्नै आवश्यकताहरु अनुसार रंग को विभिन्न श्रृंखला छान्नुहोस्, बच्चाहरु को कोठा बच्चाहरु को रंग को छनौट गर्न सक्छन्, फर्नीचर नवीकरण काठ को रंग को छनौट गर्न सक्छन् ...
अघिल्लो:कोटिंग सर्तहरु को उपयोग को मानकीकरण
अर्को:के म तपाइँको आपूर्तिकर्ता बाट अन्य आपूर्तिकर्ता बाट सामान वितरण गर्न सक्छु? त्यसपछि सँगै लोड?